Wariye caawa lagu dhaawacay Magaalada Muqdisho | Universal Somali TV
Wariye caawa lagu dhaawacay Magaalada Muqdisho
Askari ka tirsan Ciidanka Booliska ayaa caawa toogasho ku dhaawacay mid ka mid ah Wariye-yaasha ka hawlgala Magaalada Muqdisho.
Dhacdadan ayaa waxay ka dhacday xaafadda Say Biyaano ee Degmada Hodan, ka dib markii askariga uu gadaal rasaas kaga soo furay mooto bajaaj wadada mareysay.
Wariye Cabdifitaax Cabdulqaadir Shariif oo xabad kaga dhacday madaxa ayaa lagula cararay Isbitaal Madiina, oo iminka lagula tacaalayo xaaladiisa caafimaad.
Wariyaha ayaa ka hawlgalaayay Radio Danan ee Magaalada Muqdisho, sida uu xaqiijiyay Maxamed Deeq Xaaji Barre (Fiyoore), Milkiilaha ahna Agaasimaha Radio Danan.
Agaasimaha oo ka waramay sida ay wax u dhaceen ayaa yiri “Wariyaha goobtiisa shaqada ayuu ka baxay, dabcan gurigiisa ayuu ku sii jeeday, meesha ay wax ka dhaceena waa Say Biyaano, isagoo saaran mooto bajaaj ayuu askari boolis ah gadaal kaga soo riday rasaas, madaxa ayayna uga dhacday.”
“Xaaladda sidii aan marka hore moodeynay iyo hadda way kala duwan tahay. Xabadda madaxa ayay uga dhacday, qaybta kore, laakiin maskaxda ma dhex gelin. Al Xamdulillaah hadda xaaladiisa way ka soo reyneysaa, Isbitaal Madiina ayaana la dhigay.”
“Anaga ma sheegi karno sabab gaar ah oo Wariyaha loo beegsaday, askarigana ma garaneyno degmada uu ka tirsan yahay, xitaa in la qabtay iyo in kale ma cadayn karno, laakiin wuxuu ahaa askariga xilligaasi ku sugnaa Say Biyaano.”
Maamulka Degmada Hodan iyo hay'adaha ammaanka ayaa waxaan jirin wax war ah oo ay ka soo saareen tallaabada caawa lagu dhaawacay Wariyaha.
Somaliya ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dalalka ugu halista dunida ee Wariye uu ka hawlgalo, sababo ku aadan, iyadoo loogu gaysto cago-jugleyn, dhaawac iyo dilba.
Kan-xigaWararkii ugu dambeeyay xaaladaha Coro...
Kan-horeCiidan fara-badan oo caawa lagu soo d...
54,017,143 unique visits